insert data into local sql server from website — MYSTERY ZILLION
insert data into local sql server from website
September 2013 edited September 2013 in Web Development
website တစ်ခုခုမှ data ကို
hosting(Webserver) ထဲက databaseထဲမှာ မသိမ်းဘဲ
local sql server မှာသိမ်းချင်လို့ပါ။data ကို local မှာ
September 2013 Administrators
မျက်စေ့တောင်လည်တယ် Local ဆိုတာက Webserver Run နေတဲ့စက်က သူ့အတွက် Local ပဲမဟုတ်ဘူးလား အဲဒီအပေါ်တင်ထားတဲ့ Database ဆိုတာ Local ပဲလေ Remote မှမဟုတ်တဲ့ဟာ။ တစ်ခုရှိတယ် ခင်ဗျားငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့စက်ကို Local လို့ပြောချင်တာဆိုရင်တော့ မရဘူးတော့ မဟုတ်ဘူးရနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် Web Server နဲ့ ခင်ဗျားသုံးနေတဲ့ Network ဟာ တစ်နည်းနည်းနဲ့ Access လုပ်လို့ရရင်တော့ သိမ်းလို့ရပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လို သိမ်းရလဲ မသိဘူးနော်
ဘယ်လိုမှထွေထွေထူးထူး မလုပ်ရဘူးလေ ခက်ခက်ခဲခဲအလုပ်မှမဟုတ်တဲ့ဟာ Webserver နဲ့ Database တင်ထားတဲ့ စက်နဲ့ Interact လုပ်လို့ရတဲ့ Network မှာရှိမှတော့ Webserver ပေါ်က ကိုယ်ရေးထားတဲ့ Website က Database Connection မှာ Server name ကို Database တင်ထားတဲ့စက်ရဲ့ Domain ဒါမှမဟုတ် IP ပဲပေးရုံလေးပဲဟာ အဲဒါဆိုရပြီပဲလေ။
I see. thank CalmHill. so local sql server need to open 24 hours per day.
That's the requirement of your choice. If you want to separate DB Server and Webserver, you will need to maintain both servers 24/7.
Yes,Need to open 24 hr,but i thinks to links web host server and local db server,
some say MyODBC can use with synchronizing
ဘာလုပ်ချင်မှန်း မရေမရာဆိုရင် အကြံပေးလို့မရပါ အောက်ကမေးထားတွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြန်ဖြေရင်အကြံပေးလို့ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၁။ အဓိကရည်ရွယ်ချက် (ဘာအတွက်ကြောင့် Server ပေါ်ကနေ တစ်ခြားစက်ထဲ ထည့်ချင်တာလဲ)
၂။ web host server ဆိုတာဘာလဲ အတိအကျပြန်ပြော (ဘယ်နေရာမှာလဲ၊ ဘာဆော့ဝဲတွေတင်ထားသလဲ၊ ဘာအတွက်လက်ရှိသုံးနေသလဲ)
၃။ local db server ဆိုတာဘာလဲ (ဘယ်နေရာမှာလဲ၊ ဘာဆော့ဝဲတွေတင်ထားသလဲ၊ ဘာအတွက်လက်ရှိသုံးနေသလဲ)
၄။ Database Server ဘယ်နှစ်ခုရှိနေလဲ
Microsoft based network locally and thus use SQL Server for storing their local databases
that use from the whole office and which use share database in the same sql server,but eg.warehouse
other place insert report data into share database in the same sql server in office
warehouse doesnot locate in the same network,so can connect with internet. i thinks
1.web host server means internet hosting/domain
2.local dbserver is microsoft sql server
3.only one db server in office
အင်း ဟုတ်ပြီအဲဒါဆိုရင် Hosting ကို ရုံးထဲမှာ Webserver မရှိပဲတစ်နေရာက Hosting ဝယ်ထားတယ်လို့ ယူဆလိုက်မယ် ခင်ဗျားရုံးက Internet Gateway မှာ Public IP ရှိသလား Public IP ရှိတယ်ဆိုရင် Static or Dynamic လားကြည့်ပြီးပြန်ပြောပါ။
I have public ip but,i don't know how to check dynamic or static,i thinks dynamic is use database
i use database mysql and php.
အင်း ခင်ဗျားရဲ့ Public IP က Dynamic or Static ကတော့ ကိုယ်ယူထားတဲ့ ISP နဲ့ပြန်စစ်ပါ ဒါမှမဟုတ် အင်တာနက် လိုင်းစယူတုံးက စာရွက်စာတမ်းမှာပဲ ပြန်ကြည့်မှသိပါလိမ့်မယ်။ Database Server ဟာပြောပုံအရဆိုရင် Internal Network မှာရှိလိမ့်မယ် Static ရှိတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားရုံးက Network Administrator ကို Gateway က Public IP မှာ Port 1433 ကိုဝင်လာရင် Internal Network က Database Server ရဲ့ Internal IP ကို Port Forward လုပ်ခိုင်းပါ။ SQL Server ရဲ့ Port က 1433 မဟုတ်ပဲ ပြောင်းထားရင် ပြောင်းထားတဲ့နံပါတ်ပြောင်းသုံး။ အဲဒါဆိုရင် Webserver ပေါ်က PHP Application ကနေ ခင်ဗျားရုံးရဲ့ Gateway IP ကို Connect လုပ်ရင် ရုံးထဲက Internal Network ထဲက SQL Server ကို Connect လုပ်လို့ရနေပြီ အဲဒါဆိုရင် တိုက်ရိုက် Access လုပ်လို့ရနေပါပြီ။
ADSL ဖုန်းလိုင်းမှ internet ယူထားတာဗျ,public ip ဆိုတာကျွန်တော်က .com နဲ့ယူထားပြီးကိုယ်ပိုင်ဝက်ဆိုက်
ရှိတာကိုပြောတာပါ။အစ်ကိုပြောတဲ့ public ip က
September 2013 edited September 2013 Registered Users
ip address ကို အကုန်လုံးအတူတူဖြစ်အောင်လုပ်
gateway,internal server,sql server တို့ရဲ့ ip ကို
the same ပြောတာလားမသိဘူးနော်သိပ်မရှင်းလို့ပါ။
You can get public IP from your ISP. But some ISP gives only private IP rather than public IP such as in Myanmar.
thanks bro,first i will get public ip and connect later.when i get